Brexitကိစ္စဆွေးနွှေးညှိနှိုင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့် အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သည့် သက်ရောက်မှုမျာူ ရှိနေသော်လည်း ဗြိတိန်၏ စီးပွားရေးမှာ ပြန်လည်အခြေအနေကောင်းမွန်လာနေပါသည်. ထို့ကြောင့် အင်္ဂလန်ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် မကြာမီမှာပင် အတိုးနှုန်းများ မြှင့်တင်လာနိုင်သည်ဟု ထရိတ်ဒါများမှ ခန့်မှန်းထားကြပါသည်. မူဝါဒရေးရာဆွေးနွေးပွဲမှ အတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက်များကို မတ်လ ၂၂ရက် 13:00 MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားပါမည်. အတိုးနှုနိးတင်ဖို့ လေသံပြင်းပါက GBPတက်နိုင်ပါသည်. ဗဟိုဘဏ်၏ င်ေကြေးမူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွင် အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ မဲပေးမှုများပါကလည်း ပေါင်တန်ဖိုးမြင့်တက်နိုင်ပါသည်. တဘက်တွင်လည်း ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် အတိုးနှုန်းတင်လိုသည့် အလားအလာမမြင်ရပါက ပေါင်စတာလင်တန်ဖိုး ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်.